Abenzi bezindlu zokucoca ulwakhiwo lwase China china kunye nabathengisi | kinda
Uchungechunge lwe-QDY / QDK lweefilitha zensimbi ezingenasici zii-304 okanye i-316L zeefilitha zensimbi ezingenasici Idesig efanelekileyo, ulwakhiwo olumbeneyo kunye nemilo entle, kwaye inokususa ifayile ye- i-faceplate, awunayo i-angle efileyo, ukucoca ukufakela kulula kwaye kulula. Inkqubo ye- umphezulu engaphakathi ocoliweyo, ukuhlangabezana neemfuno kwinqanaba lezempilo kunye nokuvumelana umgangatho we-GMP. Iifilitha ze-QDY / QDK zisetyenziswa kakhulu kunyango, ukutya, imichiza ishishini, elektroniki, kunye nokhuseleko lokusingqongileyo. Iifilitha zeQDY zilulwelo uthotho lokucoca ulwelo kunye neefilitha zeQDK luchungechunge lokuhluza igesi.
Amacebo okucoca izindlu axhotyiswe ngeegeyi kunye nemilomo yokukhupha phezulu kunye nezivalo zogutyulo kunye namaxabiso esampulu emazantsi. Indawo yokuhlala ene-filter eyodwa 316L ixhotywe ngokuvulwa kwesayizi enkulu, ukuququzelela inaliti kunye nokumanzisa izihluzi. Iidayimitha zokuvuleka kunye nezihlanganisi zineentlobo ezininzi zokubalulwa kukhetho. Uyilo olusemagqabini kunye nolwakhiwo olusengqiqweni lwenza ukuba izindlu zikhululeke kwikona efileyo; intsalela encinci inciphisa ukubakho kosulelo.
Iinkcukacha eziphambili kunye neMilinganiselo
Izinto zokwakha izindlu: SS304, SS306L
Cl umbhobho uqinisa okanye evulwa: SS304
-O-amakhonkco: abicah irabha, fluorine irabha, EPDM, njl
I-QD-- ★ - □ - ◎ - ○ - ☆ - △ - ◇
Ungeniso / indawo yokudibanisa
Unxibelelwano oluphezulu nolusezantsi
Egqithileyo flow eliphezulu iCartridge lokucoca ulwelo
Okulandelayo: umtya inxeba iCartridge lokucoca ulwelo